ဘယ်ဖက်လက်ထဲမှာ မမြင်ရတဲ့ဓားနဲ့လူငယ် | ဥက္ကာကိုကို
ဘယ်ဖက်လက်ထဲမှာ မမြင်ရတဲ့ဓားနဲ့လူငယ်	Posted by oakkarkoko on March 26, 2011
သေမင်း၊ တစ္ဆေ၊ မိုးကြိုးပစ်ရဲတိုက် နဲ့ ဇောက်ထိုးဆွဲခံရသူ
တားရော့ထုပ်ကို ဆွဲလှန်လိုက်တိုင်း ကဒ်ဆိုးတွေ ထွက်ထွက်ကျလာတယ်….
ခုတလော ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ သိပ်အစေးမကပ်ဘူး
ဘယ်အရာနဲ့မှ အစေးကပ်ခဲ့တာ မဟုတ်လေတော့ ရှိစေပေါ့။
စကြ၀ဠာကြီးကို လိုချင်တယ် ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သဲတစ်ပွင့်မျှသာရခဲ့တယ်
ကဗျာရေးဖို့ကြံစည်တာ… သုံးနှစ်သုံးမိုး ကြံစည်မှုပဲမြောက်ခဲ့
ခပ်တုံးတုံး ခပ်အအ ခပ်ကြောင်ကြောင် ခပ်ဂေါက်ဂေါက်
အသစ်မဖြစ်တော့တဲ့ ရာဇ၀င်ကို ဂုံနီအိတ်နဲ့ ဖုံးထားလိုက်တယ်။
တစ်လက်စတည်း… တောင်း ပန် ပါ တယ် အေး ငြိမ့် ငြိမ့် မွန်
လှေပေါ်မှာ ကားယားခွရပ်ရင်း ခြေချော်လက်ချော်
ပြည်လမ်းပေါ်ရောက်တိုင်း စိတ်ဓာတ်တွေက ရိုင်းစိုင်းလာရဲ့။
ငါ ရိုးမသား… နင် တောင်ပေါ်သားလား….
ငါ ရိုးမသား…. နင် မြေပြန့်သားလား……
မှန်ထဲက မျက်စိနှစ်လုံးကြား နှာယောင်တည့်တည့်စိုက်ကြည့်
ဦးအုန်းဖေရဲ့ စံလွဲစိတ်ပညာစာအုပ် ရှာမတွေ့သေးဘူး
သတင်းတွေကြားချင်ပါတယ်၊ သတင်းငတ်တဲ့ရောဂါ… သတင်းပြတ်တဲ့ရောဂါ
မနက်သုံးနာရီမှာ ပုတီးစိပ်သံ တဂျောက်ဂျောက်၊ ကုလားဖန်ထိုးသံ တရွှမ်းရွှမ်း
လှည်းတန်းမှာ နေ၀င်ခဲ့တဲ့ ရက်အသောင်းသောင်း
ငယ်ငယ်ကလို ကြိုဖြစ်မယ့်အရာကို အိပ်မက်မက်တတ်တဲ့ အစွမ်းမျိုး
ကွမ်းစားရင်း ဂိမ်းဆော့ရတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ
ကုလားဖြူဘာသာစကားကို ခုထိနားမလည်သေးဘူး ငတုံး။
ဂျပန်ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ဗုံးကြဲလိုက်တယ် ဒေ၀တာတို့စောင့်ရှောက်ပါစေ
တစ်ခါတုန်းက ညနေခင်းအုံ့အုံ့နဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းကလေး
ရေမွှေးဖြန်းထားတဲ့ အခန်းကျဉ်းထဲက သောကြာဗီးနပ်စ်
မြစ်တစ်ဖက်ကို ပြန်ငေးတိုင်း လွမ်း လွမ်း နေတဲ့လူငယ်
သေမင်းနဲ့အတူ နွေရာသီမြင်းစီးထွက်ခဲ့တယ်။ ။
← ကံ့ကော်ရွာမှ ပန်းချီဝတ်ဆံများ	ပျော်ရွှင်မှုတွေလျှံကျနေတဲ့ကဗျာ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...